कसरी ल्यायो बाम गठबन्धनले भारी अभिमत ? - Dainik Nepal
कसरी ल्यायो बाम गठबन्धनले भारी अभिमत ?
निर्मल भट्टराई २०७४ मंसिर २३ गते ८:१०
प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको नतिजा धमाधम सार्वजनिक भईरहेको छ । नेपाली कांग्रेस बाम गठबन्धनभन्दा निकै पछाडि परेको छ । चुनाबी प्रतिस्पर्धामा बाम गठबन्धन केन्द्रीय र प्रदेश सभामा हावी हुने निस्चित भएको छ । आखिर जनताले किन रोजे त बाम गठबन्धनलाई ?
क) जनताको रोजाई समाजवाद
०४६ सालको परिवर्तनपछि भएको संसदीय निर्वाचनमा सशक्त प्रतिपक्षमा संसदमा उपस्थित भएपछि नेकपा(एमाले)का तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले नब्बेको दशकमा विश्वमा आएको परिवर्तन र नेपाली जनताको बहुलवादी चरित्रसंग मेल खाने जनताको बहुदलीय जनवादलाई आफ्नो पार्टीको सर्वस्वीकृत नीतिको रुपमा अगाडि बढाउन सफल हुनुभयो । वाम आन्दोलनका विभिन्न विभिन्नभङ्गालाहरुलाई समेट्दै एमाले अगाडि बढ्यो । लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मान्यतालाई एमालेले देशको समग्र परिवेशमा मात्र होईन,आफ्नो आन्तरिक पार्टी जीवनमा समेत पूर्णरुपेण आत्मसात गर्यो ।
परिणामस्वरुप एमालेले सो अघि नेपाली कांग्रसको प्रभावमा रहेको नेपालको राष्टिय पूँजीपति वर्ग र मध्यम वर्गमाथि आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न सफल भयो । लोकतन्त्र,राष्टियता, जनजीविका, मानवअधिकार, विधिको शासनप्रतिको उसको प्रष्ट अडानका कारण सबै तहका जनतामा आफ्नो विश्वसनियता निरन्तर बढाउन एमाले सफल रह्यो । यसको साथै एमालेआफ्नो समाजवादी लक्षबाट कहिल्यै विचलित भएन, बरु एमालेले समाजवादको लागि आधार भूमि तयार गर्न ०५१ सालको आफ्नो प्रथम सरकारबाटै शुरु गरेको थियो । नेपाली कांग्रेसले प्रश्रय दिएको पूँजीवादी घाँटी कटुवा प्रतिस्पर्धाभन्दा एमालेले शुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा र देश विकासको सन्तुलित नीति जनताले निकै मन पराए ।
नेपालको अर्को प्रमुख बाम घटक नेकपा(माओवादी केन्द्र) ले सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्यका लागि सशस्त्र विद्रोहको कार्यनीति लियो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्राप्तिपछि यो पार्टीले पनि बलपूर्वक सत्ताकब्जा गर्ने नीति छोडेर एमालेको जस्तै जनताको मतद्वारा निर्वाचित भएर शासन गर्ने कार्यनीति अवलम्बन गर्यो । सत्तामा रहँदा उसले पनि एमाले जस्तै आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका एजेण्डा कार्यान्वयन गर्न प्रयत्न गर्यो । यही नै प्रमुख कारण हो —पार्टी एकतासम्म पुग्ने गरी बाम गठबन्धन निर्माण गरेर निर्वाचनमा यति ठूलो सफलता हासिल भएको छ ।
ख) सार्थक र निर्णायक एकता
बाम विभाजन भएदेखि नै नेपाली जनताले बाम एकताको अभिलाषा राखेका हुन् । तर नेपाली बाम आन्दोलनले विभाजनको पीडा भोग्दै आयो । त्यतिमात्र होइन, बाम विभाजनलाई मलजल गरेर तत्कालीन राजतन्त्र र नेपाली कांग्रेसले आफ्नो सत्ता लम्ब्याउन प्रयत्न गरिरहे । एक अर्कालाई शत्रुवत् व्यवहार गर्न उक्साई रहे । तर जनताको बहुदलीय जनवाद यस्तो शक्तिशाली विचार बन्यो, यसले सबै कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरुलाई एकै ठाउँमा ओत प्रदान गर्न सक्यो ।
विचारको साथसाथै नेकपा(एमाले)मा समकालीन नेपाली राजनीतिमा सबभन्दा शीर्ष नेतृत्व पुञ्ज छ । गणेशमान, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजासंग पौठेजोरी खेलेर आएको एमाले नेतृत्वलाई देउवा र रामचन्द्र पौडेलसंग प्रतिस्पर्धा गर्न कुनै गाह्रो थिएन। के पी ओलीको खरो राष्टवादी अडानलाई नेपाली जनताले सधैं मुक्त कण्ठले प्रशंशा गरे । एमालेले देशको पक्षमा खेलेको भूमिकाको एक एक हिसाब किताब जनताले राखेका रहेछन् भन्ने यो निर्वाचनमा एमालेको पक्षमा जनताले प्रदान गरेको अभिमतले प्रष्टदेखाई दिएको छ । एमाले एक्लैको बहुमत पुग्ने भएकोले एमाले माओवादी विचमा खेलेर एकता भाँडिन सक्छ भन्ने अड्कलवाजीको पनि अब कुनै तुक रहेन । आफ्नो जीवन हत्केलामा राखेर राष्टव्यापी सशस्त्र विद्रोह गरेर आएका प्रचण्ड, बादल प्रकाशलगायतका नेताहरुको परिपक्वता र सुझबुझले यो निर्णायक एकता अब कसैले रोकेर रोकिदैन । जसरी बाह्रबुँदे सहमतिले नेपाललाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पुर्यायो, त्यसरी नै एमाले माओवादी एकताले देशलाई समाजवादमा पुर्याउने निस्चित छ ।
ग) स्थायित्वको पक्षमा जनता
राजनीतिक अस्थीरता नेपालको समस्या बनेर आएको छ । यसले देशको आर्थिक विकास र समृद्धिमा ठूलो तगारो भने पनि फरक पर्दैन । बहुमत दिंदा पनि राम्ररी सत्ता चलाउन नसकेको कांग्रेस भोगेका नेपाली जनता एमाले जस्तो पार्टीलाई बहुमत दिएर देशमा स्थीर सरकार , सुशासन र समृद्धि चाहन्छन् । साथै सबै बाम एक ठाउँमा आएर आफ्नो लक्षमा अघि बढ्न जनताले म्यान्डेट दिएका छन् ।
घ) संघीयताको सफल कार्यान्वयन
एमालेले भनेजस्तो जनता नेपालकै विशिष्टतामा आधारित संघीयताको पक्षमा छन् भन्ने प्रष्ट देखाएको छ ।संघीयतालाई आधार बनाएर देशमा अशान्ति मच्चाउन प्रयत्न गर्ने दृश्य अदृश्य शक्तिलाई यो निर्वाचनले दह्रो झापड दिएको छ । संघीयता सम्बन्धी बनिबनाउ विवादलाई पनि यो जनमतले समाप्त गरिदिएको छ ।अब प्रदेशसभाको निर्वाचनले संघीयताको प्राविधिक र प्रशासकीय व्यवस्थापन गर्नेछ । विगतमा संघीयतासम्बन्धी फरक धारणा राख्ने एमाले र माओवादी केन्द्र एकै ठाउँमा आउनुले संधीयताको आगामी व्यवस्थापन थप सहज हुनेछ ।
बाम गठबन्धनको पक्षमा देखिएको जनउभारको उसले उच्च महत्व दिन सक्नुपर्छ । जनताको यो अपार समर्थनको मर्म र भावना अनुसार ईमान्दारीपूर्वक देश निर्माणमा होमिनु आवश्यक छ । नत्र यो समर्थन क्षणभङ्गूर पनि हुन सक्दछ ।ईतिहासबाट बाम गठबन्धनले शिक्षा लिएर आफूलाई झन जिम्मेवार र अझ व्यवस्थित बनाउन सक्नुपर्छ । सुशासनका लागि चुस्त केन्द्रीय र प्रदेश सरकार बनाएर तलदेखि माथिसम्म व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितता र ढीलासुस्ती हटाउन विशेष पहल थालिहाल्नु पर्छ ।
ट्रमामा परेको दार्जीलिङ उपचारको आवश्यकता
वामदेवको बुद्धि, विवेक र पार्टी एकीकरणको नालीबेली
“श्री ५ त्रिभुवन—‘आम्माओ आओ आओ !”
यी नेपाली गायिकाले गरिन् नरेन्द्र मोदीको ध्यान भङ्ग, थाम्नै सकेनन् मन
कात्तिक १६ मा सर्‍यो काङ्ग्रेसको चियापान